Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii ka dhacay Hoteel Wehliye ee magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay qaraxyadii ka dhacay Hoteel Wehliye ee magaalada Muqdisho (SAWIRO)
In ka badan 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay qaraxyo mataano ah oo saakay ka dhacay Hoteel Wehliye ee ku yaalla degmada H/wadaag ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyadaasi oo ahaa labo qarax ayaa la sheegayaa in loo adeegsaday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, waxayna qaraxyadaasi ahaayeen kuwa ismiidaamin ah oo lagu weeraray Hoteel Wehliye.
Qaraxii koowaad ayaa ahaa mid lagu dhuftay afaafka hore ee Hoteel Wehliye, halka kii labaadne la sheegayo inuu ahaa mid lala beegsaday gaari uu lahaa wasiirka kaluumeysiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Ceymooy oo hoteelka banaankiisa yaalay.
Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn halka ay qaraxyadaasi bar-tilmaameedku ahaa ayaa hadane warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso waxay sheegaysaa inuu ahaa mid lala damacsanaa in lagu qaarijiyo wasiirka, oo xilligaasi ka maqnaa goobta ay qaraxyadu ka dhaceen.
Dhinaca kale, saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa u xaqiijiyay in dadka ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxyadaasi ay isugu jiraan dad shacab ah iyo qaar ka mid ah illaada Hoteelka.
Labadaasi qarax kadib waxaa goobta soo gaaray gaadiidka gurmadka deg dega ah oo halkaasi ka qaaday dhaawacyada ka dhashay qaraxyadaas, iyadoona goobta qaraxyadu ka dhaceen ay xilligaasi noqotay mid aad u mashquul badan.
Sidoo kale, ciidamo aad u badan oo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee NISA ayaa markii dambe soo gaaray goobta ay qaraxyada ka dhaceen, waxayna halkaasi ka sameeyeen howlgalo baaritaano ah.
Qaraxaan ayaa noqonaya kii labaad oo muddo saacado gudahood ah ka dhaca magaalada Muqdisho, iyadoona saakay qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay meel ku dhaw saldhig ciidan oo ku yaala degmada Wadajir, kaas oo uu ku geeriyooday ruuxii qaraxa fuliyay, iyo dhaawaca 2 qof kale oo shacab ah.